Momba ny fisie Outlook Personal Folders (PST)
Home Products DataNumen Outlook Repair Momba ny fisie Outlook Personal Folders (PST)
Ny rakitra fampirimana manokana, miaraka amin'ny fanitarana rakitra .PST, dia ampiasain'ny vokatra fifandraisan-dahatsoratra Microsoft isan-karazany, ao anatin'izany ny Microsoft Exchange Client, Windows Messaging ary ny kinova Microsoft Outlook rehetra. PST no fanafohezana ny "Tabilao fitehirizana manokana".
Ho an'ny Microsoft Outlook, ny entana rehetra, ao anatin'izany ny hafatra mailaka, lahatahiry, posts, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary, naoty sns dia voatahiry eo an-toerana ao amin'ilay rakitra .pst mifanaraka amin'izany, izay matetika hita ao anaty fampirimana efa voafaritra.
Ho an'ny Windows 95, 98 ary ME, ny folder dia:
fiara: WindowsApplication DataMicrosoftOutlook
mitondra fiara: WindowsProfilesuser anaranaLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook
Ho an'ny mpizara Windows NT, 2000, XP ary 2003, ny folder dia:
drive: Documents and Settingsuser nameLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook
mitondra fiara: Documents and Settingsuser nameApplication DataMicrosoftOutlook
Ho an'ny Windows Vista na 7, ny folder dia:
fiara: Usersuser nameAppDataLocalMicrosoftOutlook
Ho an'ny Windows 8, ny folder dia:
fiara: Users AppDataLocalMicrosoftOutlook
fiara: Users RoamingLocalMicrosoftOutlook
Azonao atao koa ny mitady rakitra "Outlook.pst", ny anaran'ny default ny fisie Outlook .pst, ao amin'ny solosainao eo an-toerana hahitanao ny toerana misy ilay rakitra.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manova ny toerana misy ny rakitra PST, manamboatra backup azy io, na mamorona rakitra PST marobe hitahirizana atiny samihafa.
Satria ny rakitrao sy ny mombamomba anao manokana dia voatahiry ao anaty rakitra PST, dia zava-dehibe aminao izany. Rehefa izany simbaina noho ny antony maro samihafa, tena mamporisika anao hampiasa izahay DataNumen Outlook Repair hamerina ny angon-drakitra rehetra ao.
Microsoft Outlook 2002 sy ny taloha dia mampiasa endrika rakitra PST taloha izay manana fetran'ny haben'ny rakitra 2GB, ary io dia tsy manohana afa-tsy ny fandefasana soratra ANSI. Ny endrika fisie PST taloha dia antsoina koa hoe format ANSI PST mahazatra. Hatramin'ny Outlook 2003, misy endrika fisie PST vaovao natolotra, izay manohana ny fisie mihoatra ny 20GB (io fetra io dia azo ampitomboina ho 33TB ihany koa amin'ny alàlan'ny fanovana ny rezistra) sy ny fandefasana soratra Unicode. Ny endrika fisie PST vaovao dia antsoina hoe endrika Unicode PST amin'ny ankapobeny. Mora kokoa izany avadiho ireo rakitra PST avy amin'ny endrika ANSI taloha ho lasa endrika Unicode vaovao DataNumen Outlook Repair.
Ny rakitra PST dia azo afenina amin'ny teny miafina hiarovana ny tsiambaratelo ao anatiny. Na izany aza, tena mora izany fampiasana DataNumen Outlook Repair handrava ny fiarovana nefa tsy mila ny teny miafina tany am-boalohany.